कक्षा १२ मा पूर्णाङ्‍कभन्दा बढी नम्बर ! |कक्षा १२ मा पूर्णाङ्‍कभन्दा बढी नम्बर ! – हिपमत
शिक्षकले जथाभावी प्राप्तांक पठाउँदा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको छ । कार्यविधिमा तोकिएको सिस्टममा परीक्षा केन्द्रहरूबाट नम्बर नआउँदा लक्ष्यअनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । गत मंसिर १६ गते कक्षा १२ को संक्षिप्त परीक्षा सकिएको थियो ।
विद्यार्थीको प्राप्तांक पठाउने क्रममा विद्यालयहरूले जथाभावी गरेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । पूर्णाङ्कभन्दा बढी नम्बर दिने र पूर्णाङ्क बराबर नै अंक दिएको पाइएको रुजुमा संलग्न एक कर्मचारीले बताए । ‘शतप्रतिशत
पूर्णाङ्कलाई ४० प्रतिशत कायम गरिएको थियो, शिक्षकहरूले कुरा नबुझेर हो कि ३० पूर्णाङ्कको परीक्षामा ६० नम्बर दिएको पनि भेटियो,’ उनले भने, ‘कतिपयले ३० मा ३० नै दिएका छन् ।’ अंग्रेजी, नेपालीलगायत भाषा विषयमा पनि पूर्णाङ्क बराबर नम्बर दिएर पठाएपछि बोर्डले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने शिक्षकलाई बोलाएर त्रुटि सच्याउन लगाएको थियो ।